Caana Booraha Hortiina Ka Muuqda Waxaa uu Sababay Cudurka Silmonela Infection | Xaqiiqonews
Caana Booraha Hortiina Ka Muuqda Waxaa uu Sababay Cudurka Silmonela Infection
Emmanuel Bissnier oo madax ka ah shirkadda “Lactalis’ ayaa xaqiijiyey in 83 dal ay shirkadooda ka bilowday howl sifeyn ah oo dib looga soo saaraayo suuqyada caana shirkadda horay ay u beec geysay oo la xaqiijiyey in ay sababeen cudurka Silmonela.
“Silmonela infection ” waa cudur sababo matag iyo dhiig saxarada soo raaca waxaana hadda la ogaaday in caanaha ay sameyn jirtay shirkadda “Lactalis uu qeyb weyn ka qaatay baahida cudurka.
Sida ay xaqiiqonews ka soo tarjuntay war lagu qoray wakaalada AFP ‘Bessnier’ ayaa wareysi uu siiyey wargeyska “Le journal” ee faransiiska ka soo baxa ku yiri “dib ayaanu egeynaa baaxada ay la egtahay howshan, waxaana rabnaa in aan suuqyada dib ugu soo saarno ilaa 12 milyan oo gasacadood.”
Emmanuel Bissnier ayaa intaasi ku daray “hadda waxey ila tahay gacansatada wey ogaadeen in ay waajib ku tahay in gasacadaha oo dhan ay ka saaraan goobahooda ganacsiga”
Bissnier oo in muddo ah ka aamusnaa howshan tan iyo markii fadeexadahan soo baxeen ayaa hadda balan qaaday in shirkadooda ay magdhaw siin doonto qoysaskii waxyeelada ka soo gaartay caanahan.
Caanahan ay sameyso shirkadda “Lactalis’ ayaa loo iibgeeyey ilaa 83 dal waxaana 9-kii bishan january la soo sheegay ilaa 35 caruur ah oo uu ku dhacay “Silmonela infection” ka dib markii ay isticmaaleen caanahada shirkadda sameyso.